Uyifomatha njani i-iPhone kwaye uyiyeke intsha ngaphandle kwebhokisi | Iindaba zeGajethi
UJose Rubio | | ngokubanzi, Tutorials
Nokuba isebenza kakuhle kangakanani i-iPhone yakho entsha, usuku oloyikisayo luhlala lusiza: kuya kufuneka uyifomathile. Kungenxa yokuba ufuna ukucima idatha kunye neefayile ezihlala kwimemori yakho kwaye ufuna ukuzisusa kwingcambu okanye ngenxa yokuba kwenzeke impazamo ebalulekileyo ngexesha lofakelo lwenkqubo yokusebenza okanye efanayo, kubaluleke kakhulu ukuba uyazi indlela yokuqhuba Inkqubo. Ngesi sizathu, kwiActualidad Gadget sifuna ukusombulula onke amathandabuzo akho kweli nqaku, kwaye siza kukubonisa Zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokubuyisela i-iPhone.
Ewe buyisela. Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba, xa uthetha nge-iPhone, uApple uthathe isigqibo ngokusungulwa kwayo ukusebenzisa igama ukubuyisela endaweni yokufomatha okanye ukucima imixholo ye-iPhone. Ke ngoko, ukusukela ngoku ukuya phambili, ziqhelanise nale migaqo, njengoko uza kuyibona amaxesha amaninzi kulo lonke uqeqesho. Kukho iindlela ezininzi zokufomatha i-iPhone yethu, kwaye umahluko ophambili ulele ukuba sinekhompyuter, nokuba yiPC okanye iMac, eneTunes efakiweyo.
1 Buyisela i-iPhone kwikhompyuter nge iTunes
2 Buyisela i-iPhone kwisixhobo ngokwaso
3 Ngaba ubona kuphela ilogo yeApple kwiscreen?
4 Ndifumene i-iPhone, ndingayifomatha?
Buyisela i-iPhone kwikhompyuter nge iTunes
Into yokuqala ekufuneka igcinwe engqondweni yile xa ubuyisela i-iPhone yethu siya kulahla lonke ulwaziOko kukuthi, iifayile, iifoto, iividiyo kunye nokusetyenziswa kuya kuthi shwaka ngokupheleleyo. Ngokusisiseko i-iPhone iya kufumaneka ilungele ukuqwalaselwa nje ngomzuzu esiwakhuphe ngawo. Ke ngoko, kufuneka sicace malunga nezizathu zokuba kutheni sifuna ukubuyisela i-iPhone yethu, kwaye sithathe amanyathelo afanelekileyo ukuze singazisoli emva kokwenza njalo. Eyokuqala icacile: yenza isipele kwifowuni yakho, nokuba kwi-iTunes ngokwayo okanye kwi-iCloud, ilifu lika-Apple.
Ukungena kumcimbi, le ndlela ihlala ixhaphakile. Emva kokuzifumana sikwimeko apho iselfowuni ayenzi njengoko silindele, okanye emva kohlaziyo esilufumeneyo Impazamo ethintela ukuba siyisebenzise ngokwesiqhelo, Esona sisombululo silula nesikhuselekileyo kukubuyiselwa iTunes. Kunokuthiwa, kwasekuqaleni, yayikuphela kwendlela yokubuyisela i-iPhone, kwaye yindlela esetyenziswa ngabantu abaninzi ukwenza njalo.
Inyathelo lokuqala ayikho enye into ngaphandle kokuqinisekisa unenguqulo entsha ye-iTunes efakiweyo kwikhompyuter yethu. Siqhagamshela i-iPhone yethu kwikhompyuter ngentambo esemthethweni ye-USB-Lightning kwaye ivule i-iTunes. Siza kufikelela ukulawula isixhobo sethu nge icon kwikona ephezulu ngasekhohlo, kwaye apho sinokujonga lonke ulwazi olusisiseko ngesixhobo.
Phakathi kwalo lonke olu lwazi, kunye nolwazi malunga ne-IMEI kunye neNombolo yeNombolo, sifumana ukhetho "Khangela ukuhlaziywa" kunye "Buyisela i-iPhone". Kubalulekile okwangoku ukuba uqinisekise ukuba sineyona yogcino yakutshanje inokwenzeka, ngendlela esiyithandayo. Nge-backup esele yenziwe, siya kuya Useto-iCloud-Fumana i-iPhone yam ukuyikhupha kwaye ke uvumele ukubuyiselwa okuchanekileyo. Okwangoku, sinokucofa apha "Buyisela i-iPhone", ngalo mzuzu ukhuphelo lwenkqubo yokusebenza luya kuqala ngasemva. Njengoko ihlala i-GB yesithuba, yinkqubo eya kuthatha imizuzu embalwa, ukwazi ukusebenzisa i-iPhone ngelixa ikhuphela, nangona kuyacetyiswa ukuba ungayichukumisi ngexesha lenkqubo.
Nje ukuba ukhutshelwe, kwaye emva kokubala ukubuyela emva kwesibini, ukubuyiselwa kwakhona kuya kuqala. Emva kwemizuzu embalwa yexesha kunye nescreen esimnyama, ilogo yeApple kunye nebha yenkqubela phambili, i-iPhone yethu iya kuqala ngendlela efanayo neyenze ngayo okokuqala, ilinde ukuba siyimise.
Buyisela i-iPhone kwisixhobo ngokwaso
Kodwa sikwanokukhetha Buyisela iPhone ngaphandle kokuxhuma iTunes Kwaye ke, nakweyiphi na iPC okanye iMac. Olona ncedo luphambili esinokuthi silusebenzise xa usebenzisa le ndlela ayisiyiyo kuphela yokuba asizukufuna ukusetyenziswa kwePC / Mac, kodwa Siza kuqhubeka nokugcina uhlobo olufanayo lwe-iOS ebesinalo ngaphambili. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bagcina ukubuyisela i-iPhone besebenzisa le ndlela kunokukhokelela kwimemori yokungabinanto kwaye ineempazamo ezithile kwaye inkunkuma kuyo, ucebisa indlela yeTunes ngaphezulu kwale, nangona ayisiyiyo into eqinisekisiweyo.
Nangona kunjalo, kwaye ukuba sifuna ukuqhubela phambili, emva kokuqinisekisa ukuba senziwe i-backup, siya kujonga icandelo "Ngokubanzi" kuseto lwe-iPhone, emva koko siza kuya ezantsi kwimenyu de sifumane ukhetho "lokusetha kwakhona". Olu khetho kulapho sinokubuyisela khona i-iPhone yethu kuseto lwefektri, kodwa sinezinye iindlela zokubuyisela useto oluthile.
Hola: Olu khetho lususa kuphela useto lwesixhobo, kodwa ligcina idatha yethu ingasebenzi.
Cima umxholo kunye noseto: Izakucima yonke idatha kunye noseto kwi-iPhone. Yeyona ndlela ukubuyisela isixhobo yethu iTunes.
Hlaziya useto lwenethiwekhi: Izakucima lonke useto lwethu ngokubhekisele kwiinethiwekhi zeselfowuni, iBluetooth kunye neWifi, silibale iinethiwekhi ezinokuthi sizigcine zeWifi. Gcina ukhumbula ukuba le ndlela inokuchaphazela amagama agqithisiweyo agcinwe kwi-keychain ye-iCloud.
Ngaba ubona kuphela ilogo yeApple kwiscreen?
Ewe inokwenzeka: emva kokubuyisela Inye kuphela into oyibonayo kwiscreen ilogo yeTunes, njengoko sibona kumfanekiso ongentla. Kule meko Singasebenzisa kuphela i-iPhone yethu kwakhona ukuba siyibuyisela nge-iTunes. Ukwenza oku, kuya kufuneka silandele amanyathelo kwinqanaba lokuqala lesi sifundo, kodwa nangona kunjalo, kuya kufuneka nyanzela isixhobo se-iOS ukuba singene kwiMowudi ye-DFU okanye imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ukuze ikwazi ukufikelela kuyo kwi-iTunes kwaye iqhubeke nokubuyiselwa okufunyanwa ngu-iTunes kwaye kube nakho ukuyibuyisela.
Mhlawumbi le ndlela ye-DFU ivakala ngathi sisiTshayina kuwe, kwaye kuyinyani ukuba inkqubo yayo iyinto engaqhelekanga, kodwa uzolile kuba ayisiyonto yokubhala ekhaya. Kufuneka sixhume i-iPhone kwiPC okanye kwi-Mac ngentambo ye-USB-Lightning kwaye cinezela iqhosha lasekhaya ngaxeshanye njengoko sisenza ngokufanayo ngeqhosha laMandla (IVolumu- kunye naMandla kwi-iPhone 7 kwaye kamva) ngexesha imizuzwana emihlanu. Emva koko siya kubamba kuphela iKhaya okanye iqhosha leVolumu -. Ngelo xesha ukuba sikwenze ngokuchanekileyo I-logo ye-iTunes iya kuvela ngentambo ebonisa ukuba sinetyala kwi-iPhone kwi-PC okanye kwi-Mac ukuvula iTunes. Ayisiyo inkqubo elula okanye into esiyenzayo yonke imihla, ke kunzima ukuyifumana, kodwa hlisa umoya kuba emva kwemizamo eliqela uya kuphumelela ngokuqinisekileyo.
Iinketho esizifumana kwi-iTunes xa sibona i-iPhone yethu kwiNdlela yokuBuyisa ayikho ngaphezu kokuhlaziya okanye ukubuyisela, apho ngokucacileyo siya kukhetha ukubuyisela ukufaka inkqubo yokusebenza kwakhona. Ngelishwa, nge-iPhone kwimowudi ye-DFU asizukufikelela kwidatha yakho, ke kuya kufuneka sithi ndlela-ntle kubo bonke, kodwa kuphela kwendlela esinokugcina ngayo i-iPhone yethu. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba senze ikopi rhoqo.
Impendulo ekhawulezayo nelula kukuba ewe, nayiphi na kwezi ndlela esikufundise ukuba ungayifomatha i-iPhone. Impendulo epheleleyo: ayizukunceda nganto. Ukusukela ukukhutshwa kwe-iOS 7, Zonke izixhobo ze-iOS zidityaniswe kwi-ID yomnini wazo, Nje ukuba isixhobo sibuyiselwe, xa uqala inkqubo yoqwalaselo, i-iPhone iya kucela idatha yomsebenzisi efana ne-ID ye-Apple kunye negama eligqithisiweyo ukuqinisekisa ukuba ikwangulo mntu, ke ukuba awungomsebenzisi wasemthethweni, iya kusebenza njengephepha elinobunzima. Ke into enengqondo ukuyenza kukuba, ukuba uyifumene i-iPhone, buza uSiri ukuba "Yekabani le iPhone?" Ukufumana iinkcukacha zonxibelelwano zomniniyo, kwaye ukuba akunakwenzeka, yiya kwisikhululo samapolisa uyise kwaye ufumane indawo. Ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa xa ufumana i-iPhone yakho elahlekileyo kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyifomatha njani i-iPhone kwaye uyiyeke intsha ngaphandle kwebhokisi
Ndinepad tablet, kwaye iyacotha. Ngaba ingabuyiselwa kumzi-mveliso?
UJose Rubio sitsho
Kanjalo! Indlela iyafana kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad. Ukuba uqaphela ukuba sele icotha kakhulu, ungazama indlela yokuqala yesifundo, ewe, uhlala uqinisekisa ukugcina idatha yakho kwikopi yogcino.
Phendula kuJose Rubio